စာဖြေဆုရတဲ့ ငွေလေးနဲ့ မယ်တော်ကြီးကို နားကပ်ဝယ်ဆင်ပေးတဲ့ ဦးဇင်းလေး
Local Celebrites News
Posted by သုတရသအဖွာဖွာ on April 11, 2019
သူနာပြုယူနီဖောင်းနဲ့ မြင်တိုင်း သူနာပြု အစစ်လို့ မထင်ကြပါနဲ
ဓါးကိုင်ရမ်းကားနေသူက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဓါးနှင့် ပြန်လိုက်ထိုး၍ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး
ဆာလာအိတ်ဖြင့်ထုတ်ထားသည့် အသက် ၈ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအလောင်း တွေ့ရှိ
တကယ့်ကို စိတ်ကြည်နူးစရာလေးပါပဲ..။ ဘယ်ပန်းချီရေးလို့ မမှီနိုင်တဲ့ ပုံလေးတွေပါပဲ..။ မြင်သူတိုင်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဦးဇင်းလေးတို့ သားအမိရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လောက်အထိ ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်နေလိုက်မလဲဆိုတာကို တွေးကြည့်နေကြပါလိမ်မယ်။
ဦးဇင်းလေးရဲ့ ဘွဲ့အမည် ဦးသားပညာ ကျောက်ဆည် မွေးရပ်ဇာတိလို့ ယူဆရပါတယ်..။ သင်္ကြန်ကာလလေးမှာ အသင်းစာဖြေပွဲတစ်ခုကနေ ဆုရလို့ မယ်တော်ကြီးအတွက် နားကပ်လေးတစ်ရံဝယ်ပေးပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆင်မြန်းပေးနေတာကို ကြည့်နူလွန်းလို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အခုလိုဆုရဖို့အတွက် ဦးဇင်းလေး နေ့နေ့ညည ကြိုးစားခဲ့ရကြောင်းလည်း ရေးသားထားပါတယ်..။ အမေကတော့ မျက်ရည်လေးတွေ ၀ဲနေရှာတယ်တဲ့..။ ဒီည အမေ့ ခမျာ အိပ်တောင်ပျော်ပါ့မလားကွယ်တယ့်..။ ဘယ် အိပ်ပျော်မလဲ ဦးဇင်းလေးရယ်..။ ဦးဇင်းလေးရဲ့ အမေ ဦးဇင်းလေးရဲ့ သိတတ်မှုကို တစိမ့်စိမ့်တွေးပြီး ၀မ်းသာပီတိ အပြည့်ဖြစ်နေမယ့် အချိန်တွေက တစ်ရက် တစ်ည နဲ့ ဘယ်လုံလောက်ပါ့လဲ..။
ဦးဇင်းလေး ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပြီး မယ်တော်ကြီးအပေါ် ဒီထက်ကျေးဇူးသိတတ်ပြီး သာသနာအကျိုးကိုလည်း လွယ်ကူ ချောမွေ့စွာ ထမ်းရွက်နိုင်ပါစေ..။ ဦးဇင်းလေးရဲ့ မယ်တော်ကြီးလည်း ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပြီး သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေလို့ အပန်းပြေ မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ..။
ဒီနေ့ပဲ သားပညာ အမေရှိတဲ့ ရွာကလေးကို ပြန်ရောက်ပါသည်။သင်္ကြန်ကာလလေးမှာ အမေ့အတွက် အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးပေါ့ဗျာ။ယောက်ျားဖိနပ် မိန်းမနားကပ်ဆိုတဲ့ အတိုင်း လစ်ဟာနေတဲ့ အမေ့နားလေးမှာ အခုတော့ သားပညာတစ်ယောက် စိန်နားကပ်လေးတစ်ရံ ဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ဒီနားကပ်လေး ဝယ်နိုင်ဖို့ သားပညာတစ်ယောက် နေ့/ည ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ဘယ်ကရတဲ့ ပိုက်ဆံလေးနဲ့ ဝယ်လာခဲ့တာလည်းဆိုရင် အသင်းစာမေးပွဲတစ်ခု ဝင်ဖြေတာ အောင်လို့ပါ။ စာအောင်ဆု တစ်သိန်းခွဲနီးပါးရတာလေးနဲ့ သားပညာ အမေ့အတွက် ဝယ်ပေးရတာပါ။
သားပညာ ရွှေဆိုတာ အခုမှ ကိုင်ဘူးတာပါ။ အမေကတော့ မျက်ရည်လေးတွေ ဝဲနေရှာတာ ဒီည အမေ့ခညား အိပ်မှ ပျော်ရှာပါ့မလားကွယ်။အမေ အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ………
တကယျ့ကို စိတျကွညျနူးစရာလေးပါပဲ..။ ဘယျပနျးခြီရေးလို့ မမှီနိုငျတဲ့ ပုံလေးတှပေါပဲ..။ မွငျသူတိုငျးရဲ့ စိတျထဲမှာ ဦးဇငျးလေးတို့ သားအမိရဲ့ စိတျထဲမှာ ဘယျလောကျအထိ ကွညျနူးပီတိ ဖွဈနလေိုကျမလဲဆိုတာကို တှေးကွညျ့နကွေပါလိမျမယျ။
ဦးဇငျးလေးရဲ့ ဘှဲ့အမညျ ဦးသားပညာ ကြောကျဆညျ မှေးရပျဇာတိလို့ ယူဆရပါတယျ..။ သွင်ျကနျကာလလေးမှာ အသငျးစာဖွပှေဲတဈခုကနေ ဆုရလို့ မယျတျောကွီးအတှကျ နားကပျလေးတဈရံဝယျပေးပွီး ကိုယျတိုငျကိုယျကြ ဆငျမွနျးပေးနတောကို ကွညျ့နူလှနျးလို့ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
အခုလိုဆုရဖို့အတှကျ ဦးဇငျးလေး နနေ့ညေ့ည ကွိုးစားခဲ့ရကွောငျးလညျး ရေးသားထားပါတယျ..။ အမကေတော့ မကျြရညျလေးတှေ ဝဲနရှောတယျတဲ့..။ ဒီည အမေ့ ခမြာ အိပျတောငျပြျောပါ့မလားကှယျတယျ့..။ ဘယျ အိပျပြျောမလဲ ဦးဇငျးလေးရယျ..။ ဦးဇငျးလေးရဲ့ အမေ ဦးဇငျးလေးရဲ့ သိတတျမှုကို တစိမျ့စိမျ့တှေးပွီး ဝမျးသာပီတိ အပွညျ့ဖွဈနမေယျ့ အခြိနျတှကေ တဈရကျ တဈည နဲ့ ဘယျလုံလောကျပါ့လဲ..။
ဦးဇငျးလေး ကိုယျကနျြးမာ စိတျခမျြးသာပွီး မယျတျောကွီးအပျေါ ဒီထကျကြေးဇူးသိတတျပွီး သာသနာအကြိုးကိုလညျး လှယျကူ ခြောမှစှေ့ာ ထမျးရှကျနိုငျပါစေ..။ ဦးဇငျးလေးရဲ့ မယျတျောကွီးလညျး ကိုယျကနျြးမာ စိတျခမျြးသာပွီး သကျတျောရာကြျော ရှညျပါစလေို့ အပနျးပွေ မှ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျခငျဗြာ..။
ဒီနပေဲ့ သားပညာ အမရှေိတဲ့ ရှာကလေးကို ပွနျရောကျပါသညျ။သွင်ျကနျကာလလေးမှာ အမအေ့တှကျ အမှတျတရလကျဆောငျလေးပေါ့ဗြာ။ယောကျြားဖိနပျ မိနျးမနားကပျဆိုတဲ့ အတိုငျး လဈဟာနတေဲ့ အမနေ့ားလေးမှာ အခုတော့ သားပညာတဈယောကျ စိနျနားကပျလေးတဈရံ ဝယျပေးနိုငျခဲ့ပါပွီ။
ဒီနားကပျလေး ဝယျနိုငျဖို့ သားပညာတဈယောကျ နေ့/ည ကွိုးစားခဲ့ရတယျ။ဘယျကရတဲ့ ပိုကျဆံလေးနဲ့ ဝယျလာခဲ့တာလညျးဆိုရငျ အသငျးစာမေးပှဲတဈခု ဝငျဖွတော အောငျလို့ပါ။ စာအောငျဆု တဈသိနျးခှဲနီးပါးရတာလေးနဲ့ သားပညာ အမအေ့တှကျ ဝယျပေးရတာပါ။
သားပညာ ရှဆေိုတာ အခုမှ ကိုငျဘူးတာပါ။ အမကေတော့ မကျြရညျလေးတှေ ဝဲနရှောတာ ဒီည အမခေ့ညား အိပျမှ ပြျောရှာပါ့မလားကှယျ။အမေ အသကျရာကြျောရှညျပါစေ………
ငါးအရိုးစူးလြှငျ ၁စက်ကနျ့အတှငျး သကျသာပြောကျကငျး စသေောနညျး
ကောငျးလှနျးလို့ပွနျမြှဝတောပါ နတေို့ငျးဖတျရနျ (၂၂) ခကျြ
(၂)ခါ (၃)ခါလုပျကွညျ့ရုံနဲ့ ဆံပငျကြှတျတာ၊ နှဈခှဖွဈတာ၊ ထိပျပွောငျတာ၊ ဆံပငျဖွူနရောက ပွနျမညျး(မဲ)၊ ပွနျဖွဈလာတယျ
YBS ပျေါမှာ မိနျးကလေးတှကေိုနောကျကနေ ပျေါပျေါတငျတငျကွီး လိုကျလုပျနတေဲ့ ဗီဒီယို
ကင်ဆာရောဂါ အတော်များများအတွက် အသက်ကယ်နိုင်လို့ အပမ်းမကြီးရင် မျှဝေပေးပါ
သုတရသအဖွာဖွာ is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.
© 2019 သုတရသအဖွာဖွာ